Labo Sabab Oo Ku Qasbaysa Ronaldo Inuu Ku Biiro Horyaalka Shiinaha Hadii Ka Tagayo Real Oo La Shaaciyay %
Iyadoo ay jiraan warar laysla dhex-marayo, kuwaasoo sheegaya in Cristiano Ronaldo, uu ku biiri doono horyaalka Shiinaha hadii ay soo gaba gaboobaan waayihiisa Real Madrid, ayaa waxaa sheekooyinkaas sii huriyay macalinkii hore ee Brazil, Luiz Felipe Scolari.
Felipe Scolari, oo kamid ahaa xubnihii lagu marti qaaday kasoo qeyb-galka xafladii lagu abaalmarinayay xidiga sanadka ee Portugal, taasoo uu Ronaldo, hantay ayaa wuxuu sheegay in xidiga Los Blancos, uu wax badan ka weydiiyay sida ay tahay nolasha Shiinaha.
“Cristiano Ronaldo wuxuu wax iga weydiiyay nolasha Shiinaha, wax ka badan Hal jeer, waxaana siiyay wax walba oo uu uga baahan yahay Shiinaha,” ayuu Felipe Scolari usheegay Shabakadda Esporte Interativo, oo Portugal laga leeyahay.
“Waxaan ognahay in Ronaldo uu noocyo badan yahay, uuna leeyahay wardasho, marka Shiinaha waa dalka ugu weyn aduunka waxaana mar walba usheegayaa inay ubanaan tahay fursado weyn oo uu Shiinaha ku aadi karo,” ayuu sii daba dhigay.
“Kaliya isagalee ma ahan, waxay fursad uga baahan tahay qof walba, oo doonaya inuu Shiinaha aado,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, macalinkii hore ee kooxda kubada cagta Guangzhou Evergrande, oo ka dhisan wadanka Shiinaha.
Sikastaba, hadalka kasoo yeeray Felipe Scolari, ayaa wuxuu ka dhigan yahay in Crsitiano Ronaldo, ay ku riixi karto inuu aado wadanka Shiinaha labo arrimood oo ah dano dhaqaale iyo waliba inuu ku sameyn-san karo maalgashi, maadaama uu ganacsade yahay.